China Batch အမျိုးအစားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာ Pyrolysis စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ LYBH
pyrolysis နည်းလမ်းသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာများအားကုသရာတွင်တန်ဖိုးပြည့် ၀ ပြီးတန်ဖိုးမြင့်မားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်ယာယာသန့်စင်ရေးကိရိယာများ၏ pyrolysis နည်းပညာအားဖြင့်စွန့်ပစ်တာယာများနှင့်စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်များကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းများကိုလောင်စာ၊ ကာဗွန်နက်နှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးများရရှိရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုသုညနှင့်ဆီထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းစသည့်လက္ခဏာများရှိသည်။
၁ ။ တံခါးကိုအပြည့်အဝဖွင့်ပါမြန်ဆန်သောအအေးခံခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊
၂။ အေးစက်၏အအေးခန်း၊ မြင့်မားသောရေနံထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ ရေနံအရည်အသွေး၊ တာ ၀ န်သက်တမ်းနှင့်လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေးတို့ဖြစ်သည်။
၃ ။ မူလရေ mode ကို desulfurization နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးဖြေ - ၎င်းသည်အက်စစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖုန်များကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။
၄ ။ မီးဖိုတံခါး၏ဗဟိုမှာဖယ်ရှားရေး deslaggingသန့်ရှင်းပြီးဖုန်မှုန့်ကင်းသည့်အချိန်သက်သာစေသည်။
၅ ။ ဘေးကင်းရေး: အလိုအလျောက်နစ်မြုပ်ထားသည့် arc ဂဟေဆော်ခြင်းနည်းပညာ၊ ultrasonic မပျက်စီးဘဲစမ်းသပ်ခြင်း၊ လက်စွဲနှင့်အလိုအလျောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများ။
၆ ။ အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးသည့်နောက်တွင်လောင်ကျွမ်းမှုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၇ ။ တိုက်ရိုက်အပူ: အထူးဖြစ်စဉ်သည်ဓာတ်ပေါင်းဖို၏အပူareaရိယာကိုတိုးမြင့်စေသည်။ အပူချိန်သည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာပြီးအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏သက်တမ်းကိုထိရောက်စွာတိုးချဲ့စေသည်။
၈ ။ ထူးခြားသောအပူ insulation shell ကိုဒီဇိုင်း: အလွန်ကောင်းသောအပူလျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှု, ကောင်းသောစွမ်းအင်ချွေတာအကျိုးသက်ရောက်မှု။
The တာယာတစ်ခုလုံးတင်မော်ဂျူးမှတဆင့် pyrolysis ဓာတ်ပေါင်းဖိုသို့သယ်ဆောင်သည်, အဖုံးကိုအလိုအလျောက်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်သည်, ပြီးတော့တာယာတစ်ခုလုံး pyrolyzed လျက်ရှိ၏ pyrolysis ကုသမှုအပြီးတွင်ရေငွေ့သည်အငွေ့ပျံသွားပြီးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည်အလင်းနှင့်လေးလံသောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်စက်များမှဖြတ်သန်းသွားသည်။ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည်ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုစနစ်သို့ ၀ င်ရောက်သွားသည်။ အရည်ပျော်သောအပိုင်းကိုတာယာဆီအဖြစ်သို့သယ်ဆောင်သည်။ အရည်မဟုတ်သောအပိုင်းသည်ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စနစ်မှတစ်ဆင့်လောင်ကျွမ်းရန်အပူပေးစနစ်သို့ထည့်သွင်းသည်။ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ pyrolysis လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါကျန်ရှိနေသောကာဗွန်အနက်ရောင်နှင့်သံမဏိဝါယာများကိုအပြည့်အဝပူးတွဲထားသည့်အလိုအလျောက် slag discharge system မှအလိုအလျောက်ဆေးကြောနိုင်သည်။
၁။ pyrolysis ဓာတ်ပေါင်းဖိုသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအပူကိုအပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်အပူသိုလှောင်ရေးကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အဓိကမီးဖို၏သက်တမ်းကိုသာသက်တမ်းတိုးစေနိုင်သော်လည်းလောင်စာကိုသက်သာစေသည်။
၃။ ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပိုက်လိုင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိနိုင်ပြီးပိတ်ဆို့ခြင်းပြautomaticallyနာကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်ပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာသတိပေးနှိမ်နင်းရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ပိုက်လိုင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြproblemနာမရှိကြောင်းသေချာစေရန်။ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို။
၂။ သံသရာလည်ပတ်မှုပုံစံကို ၂ နာရီခန့်ကြာသောထိန်းချုပ်နေရာမှဖယ်ရှားပစ်သောစနစ်တွင်အသုံးပြုသည်။
၆။ သန့်စင်စနစ်တွင်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ ဆာလဖာဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အလွန်အကျွံလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ကိုအထူးဓာတ်ငွေ့တွန်းစက်ဖြင့်ဖိအားပေးပြီးဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ကန်တွင်သိုလှောင်ထားသည်။ ၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်အပူပေးရန် (သို့) အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့သုံးမီးစက်များတွင်သုံးနိုင်သည်။
၇။ အဓိကမီးဖို၏အပူချိန်ကို ၂ နာရီအတွင်း ၁၀၀ ဒီဂရီအောက်သို့လျှော့ချနိုင်စေရန် convection အပေါက်များနှင့်လျင်မြန်သောအအေးခံကိရိယာများကိုအဓိကမီးဖိုထဲသို့ထည့်ပါ။
အသုတ်အမျိုးအစား pyrolysis စက်ရုံ
1. Pyrolysis စက်များအတွက်ကုန်ကြမ်း
အမှုန်များပြုလုပ်ရန်အတွက် Carbon black granulation ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရန်အတွက်သံမဏိပြားများပြုလုပ်ရာတွင် Hydraulic Baling Machine ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လောင်စာအဖြစ် burner မှအသုံးပြုနိုင်သည်။
3. pyrolysis အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ရရှိနိုင်လောင်စာ
ဆီ (လောင်စာဆီ၊ တာယာဆီ၊ လေးလံသောဆီစသည်)
ခ။ ဂဟေဆော်ခြင်းအားလုံးကိုဂဟေဆော်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့်ဂဟေပုံသဏ္ensureာန်သေချာစေရန်အတွက် ultrasonic nondestructive testing method ဖြင့်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
d. ပေါက်ကွဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိရိယာ၊ လုံခြုံရေးအဆို့ရှင်များ၊ အရေးပေါ်အဆို့ရှင်များ၊ ဖိအားနှင့်အပူချိန်မီတာများအပြင်သတိပေးစနစ်များပါရှိသည်။.
။ အစိုင်အခဲလေထုညစ်ညမ်းမှု - pyrolysis ပြီးနောက်အစိုင်အခဲသည်နက်ရှိုင်းသောလုပ်ငန်းများ၌ (သို့) ၎င်း၏တန်ဖိုးနှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်သောရေနံစိမ်းနှင့်စတီးဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ စဉ်ဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာ Pyrolysis Plant
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံဈေးနှုန်းတရုတ်ရာဘာတာရာစွန့်ပစ်ရာရော်ဘာပြန်လည်အသုံးပြုစဉ်ဆက်မပြတ်ဓာတ်ပြုစက်ရုံ 50tpd
သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ
စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Friendly Pyrolysis စက်ရုံ
ရော်ဘာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Friendly Pyrolysis စက်ရုံ
လုံးဝအဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ
တုရု Mulch ပြန်လည်အသုံးပြု Palnt
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစနစ် (ဖောက်သည်မှထောက်ပံ့ပေးသည်) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပလပ်စတစ်များအခြောက်အခြောက်ခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များပြုလုပ်ပြီးနောက်သင့်လျော်သောအရွယ်အစားကိုရရှိနိုင်သည်။ အစာကျွေးခြင်းစနစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များကိုအကူးအပြောင်းဘင်သို့သယ်ဆောင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် pyrolysis system စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်များအား pyrolysis အတွက်လမ်းခွဲမှတဆင့် pyrolysis ဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲသို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ကျွေးသည်။ အပူပေးစနစ်အပူပေးစက်ကိရိယာလောင်စာသည်အဓိကအားဖြင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို pyrolysis မှထုတ်လုပ်သောမဟုတ်သော condensable combustible gas ကိုအသုံးပြုသည်။
သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ, စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်သန့်စင်စက်ရုံ, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်, စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ, တုရုပြာ, အမှိုက်ပုံးအားပြန်လည်အသုံးချစက်,